Ethiopian Airlines na Air Côte d'Ivoire ka codeshare n'okporo ụzọ dị n'etiti West Africa na USA
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ethiopian Airlines na Air Côte d'Ivoire ka codeshare n'ụzọ ndị dị n'etiti West Africa na USA
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Cote d'Ivoire • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Ethiopian Airlines na Air Côte d'Ivoire ka codeshare n'ụzọ ndị dị n'etiti West Africa na USA
Ethiopian Airlines, nke kachasị buru ibu na Africa na SKYTRAX kwadoro Four Star Global Airline na Air Côte d'Ivoire, onye na-ebu ọkọlọtọ mba nke Côte d'Ivoire, abanyela nkwekọrịta nkwekọrịta nke ọma na Mee, 2018.
N'okpuru nkwekọrịta mmekọrịta ọhụrụ ahụ, ndị njem sitere na mba ọdịda anyanwụ Africa, ọkachasị site na Lagos, Bamako, Cotonou, Accra na Lomé ga-abanye ụgbọ elu Air Côte d'Ivoire wee nwee ọ enjoyụ na enweghị njikọ njikọ na Newark na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri Etiopia na-aga Newark site na Abidjan .
Tewolde GebreMariam, onye isi oche nke otu ụgbọ elu Ethiopian Airlines, kwuru, sị: “Obi dị anyị ezigbo ụtọ isoro Air Côte d'Ivoire rụkọọ ọrụ na-ebu ụzọ jikọọ ndị njem si West Africa na ụgbọ elu ọhụrụ anyị na-aga Newark site na Abidjan. Achọrọ m ikele gọọmentị Côte d'Ivoire na Minista ụgbọ njem ọkachasị yana Air Côte d'Ivoire maka ime ka mmekọrịta a kwe omume. A ga-arụ ọrụ ụgbọ elu Abidjan nke Etiopia na Newark na mgbakwunye na ọrụ Newark anyị dị ugbu a site na Lomé, nke a na-enweta yana onye ọrụ mmekọrịta anyị, ASKY Airlines. Mmekọrịta dị otu a n'etiti ọdụ ụgbọ elu ndị Africa dịka nwanne dị oke mkpa maka mba Afrịka iji mejupụta njikọ njikọta dị na kọntinent a na ndị na-ebu mba Africa ka ha nwetaghachi ahịa n'ahịa ha.
René Decurey, onye isi oche nke Air Côte d'Ivoire kwuru, sị: “Ọnwa ole na ole gara aga, Abidjan ọdụ ụgbọ elu nwere ikike ime njikọ kpọmkwem na USA. Oge eruola ugbu a ịmalite ụgbọ elu ndị ahụ na Air Côte d'Ivoire nwere obi ụtọ dị ukwuu iji rụọ ọrụ na codeshare na Ethiopian Airlines. Nkwekọrịta a ga-eme ka Air Côte d'Ivoire ree ụgbọ elu. Ya mere, anyị ga - enwe ike ịnye ndị njem na netwọkụ anyị, ụgbọ elu gaa USA site na Abidjan nwere otu tiketi ụgbọ elu Air Côte d'Ivoire. Anyị kwenyesiri ike na mmekọrịta a bụ mmalite nke ogologo mmekọrịta nke ga-erite uru zuru oke maka ndị njem ụgbọ elu abụọ anyị na ndị Africa bụ ndị na-agabiga Europe ịga USA. ”
Etiopia na-efega obodo 58 dị n'Africa ugbu a na ebe karịrị 112 n'ụwa niile.